သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: လူတွေမသိတဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းတစေ့တစောင်း
၂။ ဗင်ကူးဗား ကျွန်းပေါ်ကို နွေရောက်တိုင်း အနဲဆုံး တစ်နှစ်တစ်ခါတော့ သင်္ဘောနဲ့သွားတယ်။ ၃နာရီပတ်ဝန်းကျင်ကြာတဲ့ ခရီးစဉ်မှာ ဘယ်လောက်အေးအေး၊ လေတိုက်တိုက်၊ မိုးရွာရွာ၊ မြူထထ၊ သင်္ဘောထဲမှာ မစီးပဲ ကုန်းပတ်ပေါ်မှာပဲ လေပြင်းပြင်းထဲမှာ ထိုင်စီးတယ်။
၈။ ထမင်း၊ဟင်းမချက်ခင် မီးဖိုချောင်စင့်၊ ဘီဒိုတံခါး၊ ကရွတ်ခွေစသည်ကို သန့်ရှင်းတာလွန်ပြီး မောသွားတာနဲ့ ထမင်းဟင်းချက်တဲ့ဆီမရောက်တော့ပါ။..အဲ…ဟို..ရေချိုးခန်းဝင်ရင်လဲ ကောင်တာတွေ၊ ဘာတွေ၊ ဆေးနေတာနဲ့ လိုရင်းကိစ္စမေ့သွားတတ်တယ်။ (ကိုတက်စလာရော၊ မဂျစ်ရော မကောင်းဘူး)
အဆစ်ထပ်ထည့်လိုက်ဦးမယ်။ အရာရာကို အလေးအနက်ထားတတ်ပေမယ့် sense of humour ရှိပါတယ်။ သူများတွေရဲ့ ရယ်စရာကို စိတ်ပါလက်ပါ ရယ်ပေးပေမယ့် များသောအားဖြင့် ကိုယ့်ဟာသတွေကတော့ သူများတွေအတွက် ရယ်စရာမကောင်းဘူး ဖြစ်နေတတ်တယ်ထင်တယ်။ တခါက အိပ်မက်မှာ ဟာသတပုဒ်ရေးတာ စာဖတ်သူ တယောက်က ကွန့်မင့်ပေးသွားတယ်။ လုံးဝမရယ်ရဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ ဟာသများဆိုတဲ့ ကဏ္ဍကနေ အဲဒီပို့စ်ကို ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖယ်ပစ်လိုက်တယ်။
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 12:32 AM
ရယ်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ် " တဲ့။ Author
မ တယောက်ပဲအားပေးတယ်။ ကျေးဇူးပါ မ ရေ.. အဲဒီစာဖတ်သူက ကျမရေးတာ မရယ်ရလို့ စိတ်ကိုဆိုးသွားတာ..တကယ်။ သူက ဖတ်ပြီး အားပါးတရ ရယ်ဖို့ပြင်ထားတော့ မရယ်ရတော့ ဒေါသထွက်ပြီး ပြန်သွားတာထင်ရဲ့။
်ဟားဟား..အမနဲ့ ဘာညာနဲ့က နံပါတ် ၁ ကတူတယ် သိလားမအိမ့်။ ဘာညာလည်း ဈေးဝယ်ထွက်ကတာကို စိတ်အကုန်ဆုံးပဲ....
နံပါတ် ၃ ၊ ၆ ၊ ၉ အရမ်း တူတာပဲ ။
နံပါတ် ၁၀ ကို အရမ်းခိုက်တယ် ။ မလေးမှာ အဲလို စိတ်ကူးမျိုးရှိမယ် မထင်မိဘူး (ဟီဟီ) ။ မလေး အဲလို လုပ်ဖြစ်ရင် ကျွန်မကိုလည်း ခေါ်ဦး ။ ဆေးလိပ်မသောက်တတ်ပေမယ့် တခါလောက် လုပ်ကြည့်ကြတာပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် ရေမကူးတတ်တော့ ပင်လယ်ထဲတော့ မသွားရဲ ။ သဘောင်္မူးတတ်တယ် ဟီဟီ ။
၁) အင်း အင်း (ဆင်ဆာ) :X
၂) လှလှပပ ကဗျာဆန်တယ်
၃) ကောင်းပါတယ်ဗျာ- တချို့ဆို မြန်မာနိုင်ငံက လို့ပြောရမှာ ရှက်တယ်ဆိုတာ တောင်ကြားဖူးတယ်- တခါက မလေးရှား လေဆိပ်မှာ ဈေးရောင်းနေတဲ့ လူကို မြန်မာမှန်းသိလို့ နုတ်ဆက်တာ စကားနားမလည် ချင်ယောင်ဆောင် တယ်တဲ့ ဒါနဲ့ ဟေ့ကောင် လုပ်မနေနဲ့ မင်းမြန်မာ ဆိုတာ ငါသိပါတယ်ကွာ မင်းလက်မှာ သွေးလို့ တက်တူးထိုးတာ တာလေဆိုတော့မှ အဲ့ဒီလူက သူ့အနားကပ်လာပြီး တောင်းပန်သတဲ့ အကိုရယ် ဒီမှာ လုပ်စားရတာ မြန်မာမှန်း သိသွားရင် အဆင်မပြေလို့ပါ လို့ ခပ်တိုးတိုးပြောသတဲ့- အင်း သူ့အခြေနေ နဲ့ သူတော့ ရှိမှာပေါ့လေ-
၅) အဆန်းကြီးပါလား ချမ်းလို့လားဗျ
ရ) ဗျာ? နံပါတ်ချစ် :p
၈) အားပါးတရ ရယ်ပါရစေတော့- လပ် အောက် လောက်
၉) အေးဆေးပေါ့ဗျ- အနည်းဆုံး စာလေးတွေ ရေးပြီး ပန်းလေးတွေ စိုက်နေနိုင်ပါတယ်- :D
၁၀) မအိမ့်အစား ကျနော် တာဝန်ယူပေးပါ့မယ် :)
အဆစ်က အရမ်းရယ်ရတယ် :) -
(၁) ကျနော့်ဒိုင်ယာရီမှာ မအိမ့်(ဈေးဝယ်ထွက်တာမကြိုက်တဲ့ မိန်းမစစ်စစ်) ပြိုင်ဖက်မရှိ၊ နံပါတ်တစ်လို့ မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ။ ကျနော်အခုမှ ကြားဖူးလို့ပါ။ ကျနော့်ပတ်ဝန်းကျင်က မိန်းမတွေအားလုံးကြောင့် ရှော့ပင်းဆိုတဲ့အသံကြားရင် ဇက်ကြောတက်၊ ခါးနာနေရတာကြာလှပြီလေ။
(၃) ကျနော်ဆို ပတ်စပို့စ်ရှေ့ဖုံးအတွင်းပိုင်းလေးထဲကို မြန်မာပြည်မြေပုံလေးထည့်ထားတယ်။ ပတ်စပို့စ်စာအုပ်နီနီတွေ့လိုက်တိုင်း စပ်စုတဲ့လူတွေက ဘယ်နိုင်ငံကလည်းမေးပြီး ပြန်ဖြေတိုင်းလည်း မသိကြတာမို့။ ဒါပေမယ့် မအိမ့် အိုင်ဒီယာလေးက ပိုမိုက်တယ်ဗျ။
(၆) ၊ (၇) နဲ့ (၉) တူတယ်။ တော်တော့်ကို တူနေတယ်ဟ။
မောလ်ထဲ လူတွေ ရုတ်ရုတ်သဲသဲဆိုရင် ဘယ်လိုမှ မရဘူး၊ ညပွဲဈေးတန်းတို့၊ ပင်လယ်ကမ်းစပ်က ညမီးပန်းလွှတ်ပွဲတို့တော့ရတယ်။
မောလ်ထဲက ရေမွှေးနံ့ ကိုတော့ဘယ်လိုမှ မခံနိုင်ဘူး။ အလာဂျီရှိတယ်။ ဒီတက်ဂ်ဂိမ်းက တော်တော်ဆိုးတဲ့ ဂိမ်းပဲ။ ကျမ အကြောင်းတွေ လူတော်တော်သိကုန်ပြီ..ကိုတက်စ်လာ တော်တော်မကောင်းဘူးပဲ။
ဗင်ကူးဗား တစ်နေ့တော့ရောက်အောင်လာနော်။ စင်္ကာပူကဆိုရင် ခဏလေးနဲ့ရောက်တယ်။ လာရင် သဘောင်္စီးခေါ်သွားမယ်။
ရယ်ပါ..များများရယ်နိုင်ပါစေ၊ သူခင်းတဲ့ ဇာတ် ကျန်သူတွေ က နေရပြီကိုး။
ဘာညာလဲရှိသေးတယ်လေ….ကျမ ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး ရှော့ပင်ဆိုတာနဲ့ အခုတောင် ဇက်ကြောတက်တယ်။ နံပါတ် ရ တူတာ ကျမ အံ့သြလိုက်တာ။ ကျန်တာတူတာသိပ်မအံ့သြဘူး၊ အဲဒါကိုပဲ အံ့သြတယ်။
စတော်ဘယ်ရီပင်အောက်မှာ စောင့်နေတယ်ဆိုတာက ဒီပို့စ်လေးအကြောင်းကို ဆွေးနွေးမလို့ပဲဗျ. မလာတော့လည်း ဒီမှာပဲ ရေးခဲ့ရတော့မယ်
၁. တွက်ခြေကိုက်လိုက်တာဗျာ. မလေးရဲ့ ကိုကိုကံကောင်းပြီသာမှတ်.
၂.အဲဒါကြောင့်ခဏခဏဖျားတာပေါ့. လုပ်ရ၀ူးနော် နောက်တစ်ခါဆိုရင်
၃. ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ်မေ့သွားမှာ စိုးလို့ ခဏခဏ ထုတ်ကြည့်တာလားမှ မသိတာ. သွပ်သွပ်သွပ်
၄. ကျွန်တော်အဲလို ပြောဝူးနော်. စိတ်ချ. ဟဲဟဲ
၅. သဲပေါ်မှာတောင် ဂွမ်းစောင်ခြုံအိပ်တယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ နံပါတ် ၁ အကျင့်နဲ့တူသွားပြီ
၆. ကျွန်တော် ထမင်းဆိုင် ဖွင့်မလို့. စကားလာပြောမှာလား
၇.ကျွန်တော်လည်း ထူးထူးဆန်းဆန်း ဂ ရက်နေ့မွေးတယ်ဗျာ.
ဂ. ထမင်းဟင်းမချက်ချင်တိုင်း အိမ်လိုက်ရှင်းနေတာနဲ့တူတယ်. ဒီတစ်ခါတော့ မလေးရဲ့ ကိုကို ကံချိုးပြီဂျာ...
၉. အေးဆေးပေါ့. လွန်းထားထားတွေ လျှော့ဖတ်ဦး. ဇာတာက ၁၂၀ လို့ပြောထားတယ်မဟုတ်လား. ကျန်တာတွေကိုတော့ ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့ တက်စလာနဲ့ ကျွန်တော်တာဝန်ယူထားပေးမယ်. ဟဲဟဲဟဲ.
၁၀. ဘာဆေးလိပ်သောက်ချင်လဲဆိုတာလည်း မပါဘူး. လေတိုက်နေတုန်း ဆေးလိပ်သောက်ရင် မီးပေါက်တော့မှာပဲ.
မလေးက ခုလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ၀န်ခံထားတာကိုက ရယ်စရာကောင်းပါတယ်. မရယ်နိုင်ဖြစ်သွးတာက အိပ်မက်မှာမို့ပါ. အိပ်မက်ထဲဆိုတော့ ဘယ်ရယ်နိုင်ပါ့မလဲ. ကိုယ်တိုင်ဖယ်လိုက်တာတော့ မကောင်းပါဘူးဗျာ. လူတိုင်းမရယ်နိုင်ကြဘူးလေ. ရယ်မောနိုင်ခြင်းက လာဘ်တစ်ပါးပဲ မဟုတ်လား. ကျွန်တော်အရမ်းရယ်ချင်နေတယ်. ပြန်တင်ပေးနော်. နော်နော်နော်. မလေး နော်.
မအိမ့်ချမ်းမြေ့.. ဘာလို့ အသက်အရှည်ကြီးမနေချင်တာလည်း။ လောကကြီး ကိုစိတ်နာစရာတွေရှိခဲ့၊ ရှိနေလို့လား။ မသိလို့ပါ။
ကိုရန် အရမ်းရယ်ချင်နေသပဆိုလဲ အဟောင်းတွေပြန်တင်ပေးပါမယ်။ ကျွန်မလဲ ကျွန်မစာစုတွေ အားလုံး တစ်စုတစ်ဝေးထဲ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်မှာ တင်ထားမလားစဉ်းစားနေတာ..
ကျွန်မ အကြာကြီးဘာလို့ မနေချင်လဲ ရေးလိုက်ရင် ၀တ္ထုနောက်တပုဒ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် :D လူ့ပတ်ဝန်းကျင်၊ health systems စသဖြင့်ကို burden မပေးချင်လို့ လို့ပဲ တိုတိုပဲ ပြောပါရစေတော့။ အသက်တိုသော်လည်း quality life ကို ပိုပြီးလိုလားလို့ ဆိုရင်လဲ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
နံပါတ်(၁၀)က ကဏ္ဍကို ဂဏ လို့စာလုံးပေါင်း
ကျေးဇူးပါ..ကိုဂျွန်ရယ်..ဆရာလုပ်တယ်မထင်ပါဘူး၊ တချို့ထပ်ဆင့်စာလုံးတွေ ကျွန်မမရိုက်တတ်လို့၊ ပြောပြတာကျေးဇူး၊ ကျွန်မ copy and paste လုပ်လို့ရပြီ။ :)